Hatao “Lalana Pr Zafy” : ny eny Ivandry | NewsMada
Hatao “Lalana Pr Zafy” : ny eny Ivandry
Noraisin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao, tetsy Analakely, omaly, ny mpikambana eo anivon’ny biraon’ny Komity ho an’ny fampihavanam-pirenena (CRN). Nitarika ireto mpiara-dia amin’ny Pr Zafy ireto i Tabera Randriamanantsoa.
Nivoitra tamin’izany ny fangatahan’izy ireo, ny hametrahana lalana hitondra ny anaran’ny Pr Zafy Albert, eny Ivandry. Eo koa ny tokontany malalaka mitondra ny anarany ka hametrahana ny sary vato, maneho ity “Rain’ny demokrasia” ity. Manampy ireo ny fangatahan’izy ireo ny hanokanana mozea iray, hitondra koa ny anaran’ny Pr Zafy Albert. “Hampirantiana ireo asa-soratry ny profesora Zafy Albert mba ho soa iombonana lovain-jafy”, hoy i Tabera Randriamantsoa.
Na izany aza anefa, mbola hisy ny fotoana handinihan’ny andaniny sy ny ankilany ny fomba sy paika hanatanterahana izany. Nisaotra ny CUA, indrindra ny ben’ny Tanana Ravalomanana Lalao sy ny mpiara-miasa aminy izy ireo tamin’ny fanehoana fiaraha-niory, fony mbola teo am-bohitra ny razana. Teo koa ny namangian’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, tany amin’ny hopitaly tamin’ny fotoana tsy nahasalama ny Pr Zafy .